Nezvedu - Jinan Knoppo Automation Equipment Co., Ltd.
Jinan Knoppo kushandisa michina Equipment Co., Ltd.
Regai "Njere Kugadzira muChina" kuhwina kurumbidzwa kwenyika!
Knoppo Laser yakavakwa muna 2004, ndeimwe yevatungamiriri vepasirose vehunyanzvi hwehunyanzvi hwemaindasitiri laser, yakazvipira kupa laser mhinduro dzemidziyo uye ichigonesa vatengi vedu mumatavi akasiyana siyana pasirese kuti vabudirire uye vakwikwidze. Iine anodarika zviuru gumi nezvishanu zvema laser ekucheka masisitimu mumusika uye iri kuwedzera nekukurumidza hwaro hwepasi rose, Knoppo Laser iri munzvimbo yakanaka yekushandira wepasi rese mutengi base, ichivimbisa mhando yepamusoro uye ipfupi mhinduro nguva dzatove kupfuura nyika zana. Takatarisa kune hunyanzvi, kuvandudzika kunatsiridza uye kukurumidza kuvandudzwa kwetekinoroji, zvese izvi zvine chinangwa chekuwedzera kugona uye kushanduka, kudzikisira mutengo uku uchigadzira huwandu hwepamusoro hwehukama hwezvakatipoteredza nekusimudzira kune isu tese kubatsirwa. Isu tine tarisiro yekupa yakakosha matekinoroji uye akagadziridzwa ekubatanidza mhinduro eindasitiri 4.0 uye akangwara mafekitori, kubatsira mabhizinesi kuti ashandise zvakakwana mikana yakawanda inomuka mune yedhijitari zera.
Iyo chigadzirwa renji haringori chete rine rakapetera jira laser yekucheka michina mune akasiyana magadzirirwo uye zviyero, asi zvakare ye laser chubhu yekucheka michina, CO2 Laser nokuveza achiita zvokutemera muchina, Laser rokuisa chiratidzo muchina, Laser nomoto muchina, plasma yekucheka muchina, plasma pombi yekucheka robhoti, H beam yekucheka muchina, uye wokudhinda akamedura nezvimwewo Zvikumbiro zvinosanganisira zvemagetsi, fenicha, kushongedza, kugadzirisa simbi, simbi yekunyepedzera, kushambadza zviratidzo, zvikamu zvekusiya zvemuchina nemamwe maindasitiri mazhinji.
Zviverengero zvezvigadzirwa uye matekinoroji zvakawana nyika patent uye software copyright, uye vane CE uye FDA tendero Tiine yedu yakatarisana, ine hunyanzvi uye vane ruzivo timu yeR & D uye yakanyatsogadzirirwa uye yakarovedzwa yakarongeka mushure mekutengesa dhipatimendi rehunyanzvi, isu tinonyatso kupa ruzivo rwevatengi.
Sei Hunhu Hwedu
KNOPPO ine varidzi vanopfuura chiuru chevashandi, vanosanganisira vanopfuura zana vevatsvakurudzi vemashure, pamusoro pevatariri ve30 QA. Ivo vane hupfumi ruzivo mu laser indasitiri, gara uchiyedza muchina neQA system usati wasununguka. Uye kambani yedu inoshanda pamwe neSwitzerland Raytools, Japan Fuji, Germany IPG, Germany PRECITEC, Japan SMC neTaiwan HIWIN nezvimwewo, garai muchishandisa zvikamu zvakanaka zvemuchina wedu.
Sei Basa Redu
Muchina wese i3 makore garandi, uye neWIFI iri kure isina waya yekudzora system, kana iwe uine chero mibvunzo kumuchina wedu, mainjiniya edu anogona kubatana nemuchina wako muChina uye kugadzirisa matambudziko ako nekukasira.
Maawa makumi maviri nemaviri epamhepo sevhisi, mitauro gumi nematanhatu inotsigira: Chirungu, ChiFrench, ChiGerman, ChiSpanish, ChiArabic, ChiRussian, chiPersia, chiIndonesian, chiPutukezi, chiJapanese, chiKorea, chiThai, chiTurkey, chiItari, chiVietnamese, uye chiChinese cheCustom Injiniya inowanikwawo mhiri kwemakungwa.
Chinhu chakapfuura nenzira yeiyo yenyika inokwanisa chitupa uye yakagamuchirwa zvakanaka muindasitiri yedu huru. Yedu nyanzvi yeinjiniya timu inowanzove yakagadzirira kukushandira iwe kubvunza uye mhinduro. Takakwanisa zvakare kukununura nemasampula-emahara kusangana nema specs ako. Kuedza kwakanaka kunogona kugadzirwa kuti ikupe iwe sevhisi inobatsira uye mhinduro.
Zvimwe zveVatengi vedu
Anoshamisa mabasa ayo timu yedu yaakapa kune vedu vatengi!